Taakulee Application Islaamiga oo ku baxaya Afsomali Gaaldiid Page 46760552713
Home > Causes > Taakulee Application Islaamiga oo ku baxaya Afsomali
Appka Qaabka loo guto Xajka
2 Qaabkee ayaa looga qeybqaadanayaa:
3 Kala Xiriir:
Waxa maalinba maalinta ka danbeysa isasoo taraysa horumarka Tiknaloojyadeed ee Dunidu ku tallaabsanayso, ayadoo sanadkii kastaba ay soo baxayaan farsamooyin cusub oo ka fudud kana isticmaal badan aaladihii hore ee tiknaloojiyada. Waxaynu la soconaa in tiknaloojiyadu xawliga ay ku socoto awgeed ay is badaleen talefoonadii gacanta oo ay noqdeen Smartphones (Telefoono garaad badan).
Telefoonkaaga ama Tabskaaga waxaad kala soo dagi kartaa barnaamijyada Appska ah, hadii aad isticmaasho Telefoon Android ah waxaad aadaysaa un Play store ka, hadaad haysato Iphone ama Ipad na waxaad aadaysaa App store kadibna waxaad raadinaysa barnaamijka aad xiisaynayso, adigoo sifududna ulasoo dagi kara.
Hadaba walaalayaal anagoo la jaanqaadayna tiknaloojiyada casriga ah, waxaan curinaynaa Applcations (Barnaamijyo) kala duwan oo aad si fudud ugala soo dagtaan telefoonada iyo Tabskaba. Sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa walaalada khayrka jecel inay maalgaliyaan Appskaas oo ay ku duugantahay cilmi badan oo diiniya, waxayna kuu noqonaysaa sadaqo jaariya ah oo Alle kaa abaalmariyo.
Waxa noo qorshaysan tiraba dhawr Application oo lagu faafinayo dacwada iyo diinta Ilaahay, sidaa darteed nagala qeybqaado oo kamid noqo walaalada u faa’ideya bulshada Muslimiinta ah.
Appska aan wali farta ku hayno waxa kamida: (Khaalid ibnu Waliid, Qaabka loo guto Xajka iyo Cumrada, Siirada Rasuulka), appskaas waxay u baahanyihiin cid maalgalisa oo bixisa kharashaadka lagu sii daynayo. Cidii rabta macluumaad dheeraad ah hala xiriirto Sheekh Abdulaziz Mohamed Oogle, xaga hoose ayaad ka helaysaa Emailka iyo Telfoonkaba.
Qaabkee ayaa looga qeybqaadanayaa:
Hadii aad ku leedahay akoon Paypal waxaad dooranaysaa qiimaha lacagta aad bixinayos adigoo tagaya meesha Donate for this Casuse, halka ka saraysana ka dooro qiimaha aad bixinayso kadibna wuxuu si toosa kuu geynayaa Paypal iyo Emailka aad ku shubaysa lacagta, markaad dhamaystirto waxaad lasoo xiriirtaa Sheekh Abdulaziz oo waydii inuu helay lacagtaas.
Waxaad kusoo diraysaan Akoonka xawaalada Dahabshiil adigoo lanbarka akoonka iyo magaca ku qoranba ka qaadanaya Sheekh Abdulaziz Oogle
Hadii aad joogto dalka Sweden oo aad haysato Swish waxaad kusoo hagaajin kartaa telefoonka lanbarkiisu yahay 0046760552713, magacuna waa Abdulaziz Mohamed Oogle
Telefoon: 0046760552713 (Whatsup, Imo, Viber)
5.00% 50 USD
End dateAugust 31, 2017